Kedu ka esi meziwanye weebụsaịtị m maka SEO mba?
N'oge a, ụwa ntanetị nke oge a na-aghọwanye nke ụwa dum. Malite site na European Union kpuchie site n'inweta Ịntanetị karịa 80%, na ụfọdụ ọbụna ọkwa dị elu karị na-enwe ya na ihe dịka 90% nke ókèala. Ọnụ ọgụgụ ndị ahụ nwere ike ịme ọbụna karịa na ndị China nwere ihe dịka nde mmadụ 731 nde, na-anọchite anya ọkara nke ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ dum. Ọfọn, Ịntanetị na-enye ọtụtụ ọnụọgụ dị iche iche ohere dị iche iche na ndị nwe ụlọ ọrụ ahụ nwere mmasị ka a kpọgaa ha n'ókèala, n'enweghị ihe mgbochi ọdịbendị. Otú ọ dị, iji nwee ihe ịga nke ọma na nke a, ọ bụla onye na-ere ahịa n'Ịntanet kwesịrị inwe nghọta zuru oke banyere ndị ahịa dị iche iche iji nye ha naanị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ kachasị achọ.
N'otu oge ahụ, ịmepụta ọdịnaya kwesịrị ekwesị na-aghọkwa okwu a ga-atụle. Ọtụtụ mgbe, ị nwere ike iche na SEO zuru ụwa ọnụ pụtara ịnweta ọdịnaya dị n'otu na Bekee kwa ụbọchị. Ma ọnọdụ ahụ adịghị mfe dịka o nwere ike iyi na mbụ. Ihe bụ na iji ụkpụrụ ndị dị mkpa nke SEO zuru ụwa ọnụ pụtara iburu n'uche na iji ezi usoro nke usoro dị iche iche dị mkpa na njakịrị, na-akwado ọtụtụ njirimara nke njikarịcha ọchụchọ.Ọzọkwa, site na echiche nke usoro ahịa ahia ụwa, ịhazi SEO zuru ụwa ọnụ zuru oke nwere ike ịghọ ọrụ zuru ezu ma na-ewe oge. N'okpuru ebe a, m ga-eleru anya na nkwekọrịta dị nkenke ka ị nweta ike SEO zuru oke, ma mepee ikike azụmahịa nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ọ bụla n'Ịntanet.
Gbanye na mpaghara mpaghara ọ bụla chọrọ iche
Icheta ụwa dum, ị ga-achọpụta na ọbụna Google n'onwe ya nwere ụdị ọdịnaya dịgasị iche iche gosipụtara na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ (SERPs) maka ọnọdụ nke ọ bụla. M na-ekwu na ajụjụ onye ọ bụla nwere ike ịme dị iche iche site na mba ruo mba. N'ezie, Google nwere ụdị SERP nke ndị obodo na-eme ma na-eme nke ọma iji gbasoro ọnọdụ kachasị nke obodo maka ahụmịhe ọkachamara na mba ọ bụla. Banyere isiokwu na ọnụọgụ okporo ụzọ, n'okpuru ụfọdụ njedebe na-abanye n'ime asụsụ dị iche iche na okwu mpaghara. Otu akụkụ dị mkpa nke okwu ọchụchọ n'ozuzu nwere ike ọ gaghị emecha nweta nsụgharị zuru oke. A ghaghị iburu nke a n'uche na mbụ, n'ezie ịtụle ọnụ ọgụgụ obodo, ọdịmma ọdịmma nke obodo, na ọtụtụ ndị ọzọ na-adịghị ahụkebe ya ọbụna ka ndị webmasters kacha nwee ahụmahụ. Nke a pụtara na mba dị iche iche nwere ike inwe ọtụtụ atụmanya na-enweghị atụ, ọbụna n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Ichetụghị ụdị mba ndị ọzọ, karịsịa site n'ịtụle ihe ndị mmadụ chọrọ ịchọta tupu ha emesịa mee mkpebi.
Zụlite atụmatụ gị maka mba SEO
Nke mbụ, ịmepụta atụmatụ SEO zuru ụwa ọnụ, ka anyị were ya na - ejighị ya kpọrọ ihe maka otu isiokwu, dịka ọmụmaatụ na China, ọ pụtaghị otu nsonaazụ mara mma dị n'akụkụ ụwa niile. N'ihi ya, ị ga-amalite site na SEO kachasị mma, ịmepụta ihe e kere eke kpọmkwem maka ndị ị na-ahọrọ n'ime otu obodo. I mee nke a, ị ga-aghọta usoro isi mpaghara maka okporo ụzọ, nakwa dị ka ihe kachasị mkpa n'ime mkpụrụokwu kachasị mkpa. Nakwa, ị ga-etinye akwụkwọ maka ụfọdụ ọrụ ntanetị nke SEO n'ọtụtụ ọkwa zuru ụwa ọnụ. Ekwuru m na ị ga-etinye akwụkwọ weebụ gị na mkpado hreflang.
Kachasịkarị, akara hreflang na-anọchite anya koodu nke Google jiri mee ka ị mata obodo a na-eche, ya mere, asụsụ maka ọdịnaya weebụ gị.Ọ ga - enyere gị aka ijide n'aka na ọdịnaya ziri ezi gosipụtara na mpaghara mpaghara ahụ n'ụzọ ziri ezi. Dị ka ọmụmaatụ, ọbụna n'ime asụsụ Spanish, a ga-enwe okwu dị mkpa dị mkpa mgbe ị na-emepụta ọdịnaya gị maka Spain onwe ya, na ọmụmaatụ na-egosipụta ya maka ndị ọrụ Argentin. Iji mkpado hreflang ga-eme ka ọdịnaya gị dịkwuo mma site n'inwekwu ihe dị mkpa na ihe odide gị.
N'otu oge ahụ, iji mkpado hreflang na-enyere aka belata ihe ize ndụ nwere ike ịnweta ọdịnaya abụọ, na-agwa Google na edere ihe dị iche iche maka ndị na-ahụ maka mpaghara dị iche iche na nzube. Ịmalite site na ịdebanye ọdịnaya gị, M na-akwado iji usoro ISO 639-1 maka asụsụ ọ bụla, n'ahịrị na ịnweta saịtị saịtị gị niile agaghị abịa karịa 10,000 URLs, ma ọ bụ ịme ka ha kewaa n'ime akụkụ dị iche iche. N'okpuru ebe a, atụmatụ atọ dị iche iche maka ijide n'aka na ọdịnaya gị na-ejikọta na mkpado hreflang n'ụzọ ziri ezi:
Get header HTTP nkwado gị na hreflang tag iji jide n'aka na ọ na-abịa na ibe weebụ ọ bụla
Nweta usoro gị na-emepụta ma dịrị n'otu
Ka anyị jiri ya na - ejighị ya mee ihe - ime ka ebe obibi maka SEO ụwa apụtaghị nsụgharị ọdịnaya dị mfe maka ibe weebụ a kapịrị ọnụ.Anyị ga - eche ihu na ya - ịmepụta mpaghara nke a pụrụ ịdabere na ya bụ ịmepụta ihe odide nke ga - adịrị mkpa maka ọdịmma mpaghara na ọchụchọ ndị ahụ. Echere m na ị ga-ahụ otu nchọpụta isiokwu maka mba ọ bụla ị na-agwa okwu. E. g. , ma ọ bụrụ na ị ga-ekpuchi ọtụtụ ebe na azụmahịa gị, m na-atụ aro inwe ọdịda dị iche iche na, n'ezie, dị iche iche ọdịnaya maka ha iji nweta ọkwa dị mma na mpaghara, nakwa yana mkpokọta nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ.
Ọ dịghị mgbe ọ bụla ị na-akwụ ụgwọ na oge ị na-eme iji zukọta atụmatụ gị maka ụwa, mpaghara, na nke kachasị anya maka atụmatụ SEO zuru oke.M na-atụ aro ịmepụta ndepụta nke ihe kachasị mkpa, malite na mba ndị nwere ike ịnye ndị ahịa ndị ọzọ ị na-achọ n'ime niche ahịa gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya na ndị ọrụ China, ọ ga-aka mma ka ị tụlee na ihe karịrị pasent 95 nke ndị na-eji Intanet eme ihe na-eme nchọgharị na weebụ site na ngwaọrụ mkpanaaka. Ọ bụ ya mere ụdị ndị chọrọ iji merie asọmpi kwesịrị ime ka ọdịnaya ha gbanwee nke ọma maka nzaghachi mkpanaka.
N'ikpeazụ, echefula na ị ga-esi na atụmatụ atụmatụ SEO zuru ụwa ọnụ site na iji nlezianya nyochaa arụmọrụ gị ugbu a. Mee nlele elele anya maka metric niile gị n'ime mpaghara ọ bụla echere dịka o kwere mee. Na-echeta mgbe niile iji soro gị na ọnọdụ gị, yana iji kwenye na ibe weebụ gị dị na ọkwa ziri ezi maka mba ma ọ bụ mpaghara ọ bụla. A sị ka e kwuwe, echela ihere iji iji PPC mee ihe iji gbasaa n'ime ahịa ọhụrụ. Ịme ihe ziri ezi nke PPC n'ime atụmatụ SEO nke ụwa gị ga-enyere gị aka ịmatakwu àgwà omume mpaghara, usoro ntọghata, yana ịchọta nsụgharị dị mma na mba ọhụrụ ahụ Source .